Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Omicron: iyi egwu ọhụrụ ma ọ bụ ọ nweghị ihe dị mkpa?
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA
Omicron - ụdị kachasị ọhụrụ nke kparịrị ahịa ma kpatara mmachibido njem njem site na ụfọdụ mba ndịda Africa - nwere ike mebie mgbake ụlọ ọrụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na atụmatụ na-aga n'ihu iji mesie amụma nnwale, dị ka na US.
Ngosipụta bụ na ntinye akwụkwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ n'ọdịnihu, nzukọ, na ọrụ ndị ọzọ metụtara ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-emetụta atụmanya e chere na ọ ga-egbochi njem njem n'ọdịnihu, ma ọ bụ nke onwe ya, nke ụlọ ọrụ kwadoro ma ọ bụ nke gọọmentị nyere iwu, dị ka HotStats si kwuo.
Data Ọktọba, nke nwere naanị Delta ga-emeri, hụrụ mweghachi dị egwu na Middle East, nke Expo 2020 kwadoro na Dubai, ihe ngosi ụbọchị 182 nke Worldwa nke malitere na mbido Ọktoba wee gafere na Machị.
Mpaghara ndị ọzọ zuru ụwa ọnụ enweghị ike ịmegharị ihe ịga nke ọma nke Dubai na Middle East sara mbara. Na US, nnukwu indices ka na-agbadata ọnụọgụ abụọ na Ọktoba 2021 v. Ọktoba 2019.
Ebe ọ bụ na a ngwa ngwa uptick na bi site na mmalite nke afọ site n'oge okpomọkụ, ọkụkụ elu na July, bi. na US kemgbe ọtụtụ ma ọ bụ na-erughị ala, ihe mgbaàmà na ọganihu ntụrụndụ enweghị ike ịkwado n'otu ọkwa ndị gara aga.
Ka Austria maliteghachiri mkpọchi na Nọvemba 22, ọ gbatịpụrụ ya ruo Disemba 11, na-aghọ mba EU mbụ mere ụdịrị ahụ n'ihu ọgụ COVID-19.
Portugal eweghachitere mmachi siri ike, na-eme ka ihe mkpuchi ihu bụrụ iwu na inye iwu asambodo dijitalụ na-egosi ịgba ọgwụ mgbochi ma ọ bụ mgbake sitere na COVID iji banye n'ụlọ nri, ụlọ ihe nkiri na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ka Eshia-Pacific na-aga n'ihu na-ejikọta nlọghachi ya, ya onwe ya na-emechikwa oke na nzaghachi na ihe nkiri Omicron. Japan n'izu a kwuputara na obodo ahụ ga-egbochi ndị mba ọzọ, naanị izu ka emechara ihe mgbochi maka ndị nwere visa, gụnyere ndị njem azụmahịa obere oge na ụmụ akwụkwọ mba ụwa. Na Philippines amachibidola ndị si mba Europe asaa bịa, gụnyere Netherlands, Belgium na Italy.
Kedu maka ụgbọ elu?
N'aka nke ọzọ, dị ka ọtụtụ ndị ọkachamara njem na-eche ma nke ọhụrụ Omicron iche iche ga-akụda atụmatụ njem ezumike, nyocha nke Medjet mere n'oge na-adịbeghị anya (na-agba n'etiti ọnwa Nọvemba, ezigara ya na ntinye nnabata email nke ihe karịrị ndị njem 60,000), gosiri na tupu ịwa ahụ na ụdị dị iche iche enweghị ndị njem na-agba ọsọ kagbuo atụmatụ.
N'ihe dị na Nọvemba 15, ihe karịrị 84% nke ndị zara ajụjụ nwere atụmatụ njem ga-eme n'ọdịnihu. 90% kọrọ atụmatụ ime njem ụlọ n'ime ọnwa itoolu na-abịa (65% n'ime ọnwa atọ na-esote), na 70% na-atụ anya ịga njem mba ụwa n'ime ọnwa itoolu na-esote (24% n'ime ọnwa atọ na-esote). Ọ bụ ezie na 51% n'ime ha kọrọ na ụdị dị iche iche na spikes gara aga emetụtala atụmatụ njem ha n'ọdịnihu, naanị 25% nke ndị zaghachirinụ kwuru na ha kagburu n'ezie n'ihi ha.
Nchọpụta ndị ọzọ gụnyere:
• 51% kwuru na ụdịdị dị iche iche na spikes emetụtala atụmatụ njem n'ọdịnihu (27% zara “ee e,” 23% amabeghị).
• 45% kwuru na ibute ọrịa COVID-19 na ụdị dị iche iche bụ ihe na-echegbu, ebe 55% depụtara ọrịa ndị ọzọ, mmerụ ahụ, ma ọ bụ ihe iyi egwu nchekwa dị ka nchegbu ha kacha.
• N'ime ndị na-eche banyere COVID, naanị 42% nwere nchegbu maka ịnwale nke ọma yana enweghị ike ịlaghachi; 58% nwere nchegbu karịa maka ịnọ n'ụlọ ọgwụ maka COVID mgbe ha na-anọghị n'ụlọ.
• Njem azụmahịa ka dị n'ụzọ (ụzọ), na naanị 2% na-aza na njem ọzọ ha ga-abụ maka azụmahịa.
• 70% bu n'obi iso ezinụlọ mee njem, 14% na ndị enyi, 14% solo.
Dịka ihe ncheta, mmachi US Omicron dị ugbu a metụtara naanị ndị mba ofesi. Maka ụmụ amaala US na ndị nwere visa na-alọghachi na US, ihe ndị chọrọ ịbanyeghachi ka bụ otu ihe ahụ: nnwale COVID viral na-adịghị mma karịa ụbọchị 3 tupu ịlaghachi ụgbọ elu maka ndị njem gbagoro ọgwụ mgbochi, ọ bụghị ihe karịrị otu ụbọchị maka ndị njem na-enweghị ọgwụ mgbochi. Enwere ike ịchọta ozi ndị ọzọ gbasara ihe achọrọ, yana nkọwa nke "ọgwụ mgbochi zuru oke". na weebụsaịtị CDC.